नबिल म्युचुअल फण्डका दुई ओटा योजनामा बृदी – Namaste Khabar
नबिल म्युचुअल फण्डका दुई ओटा योजनामा बृदी
June 29, 2020 June 29, 2020 Namastekhabar0Comments
नबिल म्युचुअल फण्डका दुई ओटा योजनामा बृदी: नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित दुई ओटा योजनाले जेठ मसान्तसम्ममा नाफामा वृद्धि गरेका छन् । नबिल इक्विटी फण्डले वैशाख मसान्तसम्ममा रू. ९ करोड ९ लाख नाफा कमाएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा वृद्धि भएर रू. ९ करोड ७० लाख पुरयाएको छ ।
त्यसैगरी नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ र नबिल इक्विटी फण्डको नाफा बढेको हो । नबिल ब्यालेन्स फण्ड -२ ले जेठ मसान्तसम्ममा रू. ५ करोड ४३ लाख नाफा कमाएको हो । वैशाख मसान्तसम्ममा उक्त योजनाले रू. ५ करोड ३ लाख नाफा कमाएको थियो ।
नाफा बढेसँगै दुवै योजनाको प्रतिइकाई खुद सम्पत्तिको मूल्य पनि बढेको छ । नबिल इक्विटी फण्डको वैशाख मसान्तमा प्रतिइकाई खुद सम्पत्तिको मूल्य रू. ९ दशमलव ७५ रहेकोमा जेठ मसान्तमा रू. ९ दशमलव ७९ पुगेको छ । जेठ मसान्त सम्ममा नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ को सुचीकृत र सूचीकृत नभएका शेयर र मुद्दति निक्षेपमा गरेर कुल लगानी रू. ६१ करोड १६ लाख रहेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा लगानी रू. ६० करोड ७८ लाख थियो ।
त्यसैगरी नबिल इक्विटी फण्डको जेठ मसान्तसम्ममा सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लागनी रू. ७७ करोड ३७ लाख छ । यो लागानी वैशाख मसान्तमा रू. ७८ करोड ७७ लाख थियो । त्यसैगरी नबिल ब्यालेन्स फण्डको प्रतिइकाई खुद सम्पत्तिको मूल्य जेठ मसान्तसम्ममा रू. १० दशमलव ५३ पुगेको छ । यो मूल्य बैशाख मसान्तमा रू. १० दशमलव ४९ थियो ।
← सिभिल लघुवित्तको बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन
नेपालमा कोरोनाबाट २९ को मृत्यु संक्रमितको संख्या १३ हजार २४८ पुग्यो →
६ अर्ब ६३ करोडको आईपीओ हेर्नुस कुन-कुन कम्पनिको आउँदैछ ?
February 2, 2020 February 2, 2020 Namastekhabar 0
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर मूल्यमा आज पनि नकारात्मक सर्किट
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर सूचीकरणका लागि भोलि नेप्सेमा दर्ता हुँदै
May 16, 2020 May 16, 2020 Namastekhabar 0